Ocean King3Plus အား : မီးတောက်လောင်သောမီး - အမြတ်အစွန်းငါးအားကစားပြိုင်ပွဲ. ဂိမ်းဆော့ဝဲလ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ. အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဗီရို.
နေအိမ် » Ocean King3Plus အား : မီးတောက်လောင်သောမီး
Ocean King3Plus အား : မီးတောက်လောင်သောမီး
ကျနော်တို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တရုတ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်. ကျနော်တို့မျိုးစုံအမျိုးအစားထုတ်ကုန်ပေးနိုင်ပါသည်, ကဲ့သို့ ငါးဖမ်းဂိမ်းများ, ငါးအမဲလိုက်ဂိမ်း, ငါးစားပွဲ Arcade ဂိမ်း, ငါးမုဆိုးဂိမ်းစက်, စသည်တို့. သင်ဤအကြောင်းပိုမိုသိလိုလျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ!
Ocean King3Plus အား Raging မီး TAS မှငါးသေနတ်ပစ်ဂိမ်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်. Ocean King3Plus Raging Fire သည် Ocean King တွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်သည်3Plus အားစီးရီးနှင့်က2~ 10 ကစားသမားများအတွက် configure လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်.
Arcade ငါးသေနတ်ပစ်ဂိမ်းများသူဌေး: Raging နဂါး
ကစားသမား Raging နဂါးကိုဖမ်းတဲ့အခါ , ၎င်းကိုဖမ်းရန်ကွင်းဆက်ကိုစွန့်ပစ်ပြီး Struggle Mode သို့ ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်. ရုန်းကန်နေစဉ်အတွင်း, နဂါးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ထိခိုက်မှုတိုင်းကပိုများများကျလိမ့်မယ်. အကယ်၍ Raging Dragon ကိုဖမ်းမိပါက ပို၍ ဒေါသကြီးသောတိုက်ခိုက်မှုစတင်ပြီးကစားသမားသည်ပိုမိုမြင့်မားသောဆုကိုရရှိလိမ့်မည်.
Ocean King အကြောင်းပိုသိချင်ရင်3Plus အား : Raging မီးသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်, ထိုကဲ့သို့သောငါးဖမ်းဂိမ်းအဖြစ်, ငါးအမဲလိုက်ဂိမ်း, ငါးစားပွဲ Arcade ဂိမ်း, ငါးမုဆိုးဂိမ်းစက်, စသည်တို့, သင်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်.